LAMAODY SY NY TONTOLONY : Hanao hetsika ao amin’ny “Gare Manguier” Toamasina ry Tantely Rakotoarivelo
Hanatanteraka hetsika fampirantiana ao amin’ny “Gare Manguiers” Tamatave indray ilay mpamorona lamaody malaza, Tantely Rakotoarivelo. Amin’ny 03 avrily ho avy izao no hatao ity hetsika ity. 18 mars 2021
Fitafy manodidina ny 40 no hampirantiana sy haseho an-tsehatra amin’io fotoana io. Tafiditra ao anatin’izay ary homena vahana misimisy kokoa ny tontolon’ny mariazy sy ny fitafy ho an’ny vehivavy. Tanjona amin’ity hetsika ity ny hanomezan-kasina ny vehivavy ny ny lamaody. Varotra fampirantiana no tena hatao. Sady afaka mijery mpilatro izany ireo mpanatrika amin’io daty voalaza etsy ambony io no afaka mividy izay lamaody mety aminy. Ny vola azo mandritra ny hetsika kosa dia entina hanampiana ireo vehivavy any Toamasina, indrindra amin’izao volana marsa natokana ho azy ireo izao.
Hampiavaka ny hetsika ny fitantarana ny trangam-piainana sy ny fahatsiarovana manokana ny beben’ity mpanakanto mpahay lamaody ity.
Hotsaroana manokana amin’io fotoana io ihany koa ireo “styliste” nankafiziny manokana loharanon’aingam-panahiny eo amin’ny tontolon’ny famoronana. Indroa isan-taona ny ekipa miaraka amin’i Tantely Rakotoarivelo no mamoaka lamaody tahaka izao.
Tamin’ny volana desambra 2020 teo ny farany ary ity hatao amin’ny avrily ity no hisantarana ny taona 2021. Ny hanandratra ny fahaiza-manaon’i Madagasikara eo amin’ny sehatry ny lamaody no tena imasoan’ity mpanakanto ity. Resy lahatra izy sy ireo miaraka aminy fa manana zavatra tsara azo trandrahana i Madagasikara ary faniriany ny hanangana ivon-toerana lehibe momba ny lamaody eto.